Iwe unogona ikozvino kushandisa yako Banco Mediolanum kadhi muApple Pay | IPhone nhau
Apple Pay yave kuwanikwa nemakadhi kubva kumabhangi anopfuura makumi maviri kuSpain uye imwe kupfuura Ndakayambirwa.
Banco Mediolanum yatove neApple Pay uye iwe unogona kuzviita nhasi.
Iyo kadhi yekubhadhara system kune edu Apple zvishandiso, Apple Pay, Yakave nesu kubvira Zvita 1, 2016 iyo Banco Santander yakamisikidza iyo.
Kubva ipapo, Apple Pay yanga ichikura uye yatove nemabhangi makuru eSpanish, pamwe nemamwe akawanda masevhisi emari.
Nhasi iwe unogona ikozvino kushandisa yako Banco Mediolanum kadhi. Rangarira kuti kuwedzera kadhi muApple Pay pane yedu iPhone tinogona kuzviita nenzira dzakasiyana:
- Kubva kuWallet app, uchishandisa maitiro anotitungamira nekudzvanya iyo + icon kumusoro kwekurudyi.
- Kubva ku iPhone Zvirongwa, mu "Wallet neApple Pay". Ikoko tinogona "Wedzera kadhi".
- Kubva kubhangi maapplication Isu tinowanzove nehukama hwekumisikidza makadhi muApple Pay kana kunyangwe kubva webhusaiti yako.
Maitiro acho ari nyore. Pinda iyo data (ine kamera kana nemaoko) uye simbisa iyo activation, kazhinji nekuvhura iyo bhangi app kana neSimbiso yekusimbisa.
Uyewo, unogona kutarisa iyo Banco Mediolanum vhidhiyo izvo zvinotsanangura maitiro ekuzviita nemaziso.
Kuti tiwedzere kadhi kuApple Watch yedu, tinofanirwa kuenda kuApple app pane yedu iPhone. Ikoko, tsvedza ku "Wallet neApple Pay" uye wedzera iyo kadhi nyowani, nenzira imwecheteyo yatakaitira iyo iPhone.
Kwete Banco Medialanum chete yakagadziridzwa nhasi, mamwe mabhanga, akadai seN26, akaitwa kune dzimwe nyika. Mune ino kesi, N26 yave kuwanikwa kuUK (uye muSpain yanga ichishanda kwenguva yakati rebei).
MuSpain isu taingova nebhangi hombe rekutsunga kushandisa Apple Pay, ING, uye zvinoita sekunge ichapedzisira yaita saizvozvo. Y, Kunyangwe ichisimbiswa, isu hatisati taziva kuti Apple Pay ichave iripi ING.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Pay » Iwe unogona ikozvino kushandisa yako Banco Mediolanum kadhi muApple Pay
Kubva ku iPhone 7 kuenda ku iPhone X pawebhusaiti yekugadziriswazve kuSpain
Apple inotanga kutengesa maAdapter eEthernet neLighning